Raw Tianeptine Sodium Salt Powder (30123-17-2) Ndị na-emepụta - Phcoker
Tianeptine sodium nnu ntụ ntụ bụ onyinye tricyclic, bụ onye nhazi nhọrọ nke 5-HT (serotonin; sc-201146) ntinye in vitro….
Ụdị ntụ ntụ sodium Tianeptine tere (30123-17-2) video
Ụdị ntụ ntụ sodium Tianeptine tere (30123-17-2) Nkọwapụta
Product Name Ụfụ ntụ sodium na Tianeptine
Chemical Aha Tianeptine sodium; Ngwunye sodium Tianeptine; 30123-17-2; Stablon; Nhazi;
molekụla Fnhazi C21H24ClN2NAO4S
molekụla Wasatọ 458.93
Nkịtị Monoisotopic 458.104 g / mol
Mgbu Point 1800C
ObụpdeING Point 609.2 Celsius C na 760 mmHg
Sume DMSO: ≥20mg / mL
Sịkwa akwa Tigwe Desiccate na RT
Antinye Teepu salineptine sodium bụ nnu nke Tianeptine.
Tianeptine bụ antidepressant.
Ụdị ntụ ntụ sodium Tianeptine na-egbuke egbuke (30123-17-2) Nkọwapụta
Ngwá sodium Tianeptine bụ nnu nke Tianeptine. Tianeptine, nke na-eme tricyclic, bụ onye na-emepụta 5-HT (serotonin; sc-201146) na vitamin na in vivo. Tụkwasị na nke ahụ, a kọọrọ Tianeptine ka ọ rụọ ọrụ dịka onye na-emechi ihe ntinye nke dopamine ma yiri nke amineptine. Tianeptine adịghị enwe mmetụta dị ịrịba ama na ebido monoamine. N'ime ihe ọmụmụ nke ji synaptosomes dị ọcha site na ụbụrụ ụbụrụ, a kọọrọ Tianeptine ka ọ dịkwuo serotonin na mpaghara ụbụrụ nhọrọ. Enwetara synaptosomes dị ọcha site na oke na incubated na 5-HT na Tianeptine na-akpọ tritium in vitro. A na-atụle synaptosomes maka nyocha na ịhapụ nke 5-HT site na ngọngọ scintillation mmiri.
Teepu saline sodium salt na-emepụta ihe dị iche iche, nke kachasị na usoro glutamatergic.Ọ na-emepụta ntọhapụ glutamate ma gbanwee ọrụ nke onye na-anabata AMPA.Tianeptine na-emekwa dị ka agonist nke nnabata μ-opioid (EC50s = 194 na 641 nM maka ndị natara na ndị na-akpa ọchị, n'otu n'otu). Ọ dị irè dị ka fluoxetine na njikwa nke nsogbu nrụgide post-traumatic.
Tianeptine sodium nnu nwere ikike nootropic n'ihe banyere ndị mmadụ na-emetụta cognition na-adịghị mma site na nsogbu ọnọdụ uche ma nwee ikike iji meziwanye nlezianya na itinye uche na ndị nwere nlebara anya na-adịghị mma.
Teepu saline sodium Tianeptine (30123-17-2) Ngosipụta nke Action
Nnyocha ndị a na-adịbeghị anya na-atụ aro na omume dianeptine dị ka agonist zuru oke na onye na-anabata opioid (MOR). Tianeptine agbaghawo nkwupụta monoaminergic nke ịda mbà n'obi, yana usoro a na-akwado monoaminergic nke na-akwado ihe nke ọtụtụ ndị na-ahụ maka antidepressants mara. N'ụzọ doro anya, a na-eche na a na-eme ọgwụ a ka ọ nọgide na-agbanwe glutamate receptor burstamate nke hippocampal CA3 mmekorita synapse mkpakọrịta. Nnyocha a na-eme ugbu a na-egosi na tianeptine na-arụpụta mmetụta ntanetị site na mgbanwe nke ọrụ nchịkọta glutamate (dịka ọmụmaatụ, ndị nabatara AMPA na ndị natara NMDA) ma metụta ntọhapụ nke ụbụrụ neurotrophic (BDNF) nke ụbụrụ, nke na-emetụta plasticity. Nchoputa ndi ozo di nso site na akwado oru nke tianeptine n'usoro nke glutaminergic na amygdala, mpaghara obi nke ụbụrụ na-emetụta ncheta.
Tianeptine na-ebelata nzaghachi hypothalamic-pituitary-adrenal na nrụgide, ma si otú a gbochie nsogbu omume metụtara nrụgide. Na mkpanaka, nchegbu nke nnukwu njide onwe onye na-eme ka ọtụtụ mkpụrụ glutamate dị na amygdala na-enweghị ihe ọkpụkpụ bụ nke dianeptine mebiri. N'ụzọ na-adọrọ mmasị, SSRI fluoxetine mụbara ogo nke glutamate na amygdala na-enweghị ihe ọ bụla n'agbanyeghị ọnọdụ nrụgide. Ihe ndekọ ndị a na-egosi na ọrụ nke tianeptine dị iche na SSRI ma kwado echiche bụ na usoro ihe nke tianeptine na-emetụta mgbanwe nke ọrụ glutaminergic na amygdala na hippocampus.
Na mgbakwunye na usoro ndị a dị n'elu, dianeptine bụ ọgwụ na-enye nsogbu na ọgwụ nchegbu nke na-akpali mbido serotonin (5-hydroxytryptamine; 5-HT), na 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) n'ime anụ ahụ.
uru of Tebụl sodium nke Tianeptine (30123-17-2)
Ngwá sodium Tianeptine nwere ike ịgwọ ọrịa ịda mbà n'obi.
Tianeptine sodium nnu nwere mgbochi nchegbu na antidepressant na yana nootropic àgwà.
Nchịkwa sodium Tianeptine na-eme ka ọnọdụ dịkwuo mma ma melite ọnọdụ uche.
Nnu sodium Tianeptine nwere ike igbochi mwakpo egwu site na ime.
Olu saltium Tianeptine na-echekwa ihe mgbu metụtara fibromyalgia.
Ejiri sodium nnu nke Tianeptine mee ihe na ọgwụgwọ nke nkụda mmụọ na ụmụ nwoke nwere dysfunction.
Ngwá salt sodium Tianeptine nwere nrụrụ dị nro maka ADHD.
Nnu sodium Tianeptine na-akwalitekwa nkwụsị.
-atụ aro Teepu saline sodium Tianeptine (30123-17-2) Ụdị
Tianeptine Sodium nwere obere ndụ na nanị 2.5 awa14, ma choro redos abụọ n'ime ụbọchị. Ngwá sineptine sodium dosage bụ 12.5 mg were ugboro atọ kwa ụbọchị, maka ngụkọta nke 37.5mg kwa ụbọchị.
Echefula 50mg nke Tianeptine Sodium n'otu ụbọchị. Ime otú ahụ nwere ike imeghe ụzọ maka ịṅụkwu mmegbu na ọgwụ ike.
mmetụta nke ntụ ntụ sodium Tianeptine (30123-17-2)
Tianeptine sodium nnu ntụ na-arụkọ ọrụ na ọtụtụ akụkụ nke ụbụrụ gụnyere ndị nabatara oge, nke nwere ike ịmepụta mmetụta nke euphoria. Mmetụta ndị ọzọ na oge dịgasị iche gụnyere ihe ndị a:
▲ Isi ọwụwa (ruo 18%)
▲ Dizziness (ruo 10%)
▲ Nchegbu na-emenye ụjọ / abalị (ruo 20%)
▲ Ụra (ruo 10%)
▲ Ọnụ oyi (ruo 20%)
Mmetụta ndị ọzọ gụnyere ihe dịka afọ ntachi, ọgbụgbọ, nchekasị ma ọ bụ Imeju Imeju. Nchegbu ndị siri ike gụnyere nkwụsị mgbe emechara ya na ihe dịka 0.1 - 0.3% nke ndị ọrụ ga-enwe nsogbu a. Kedu mgbe ọ bụla, dịka ị pụrụ ịhụ, mmetụta dị n'akụkụ Tianeptine sodium nnu ga-adabere na nyocha mmadụ na nke onwe ya.
O kwesiri iburu n'uche na:
Ndị agadi kwesịrị ịnara nnu nke sodium Tianeptine dị nta karị, dịka ndị kwesịrị ọrịa ga-eme. Ọdịghị mkpa ka a gbanwee ọgwụgwọ na ndị ọrịa na-egbu egbu ma ọ bụ ọrịa na-agwọ ọrịa na-agwọ ọrịa, ma ọ bụ ndị ọrịa na - agbapụta ọrịa .Ọ bụ ezie na Antidepressants, dị ka tianeptine, mere ka ọnyá imeju ghara ịba uru.